Ungazipapasha njani iifayile ze-AutoCAD kwi-Intanethi- iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Indlela yokupapasha i-AutoCAD Iifayile kwi-Intanethi
Indlela yokupapasha i-AutoCAD Iifayile kwi-Intanethi
Omnye weyona mibuzo isoloko ibuzwa ngulo “Ndingazisebenzisa njani izakhono ze-AutoCAD ezibizwa ngokuba ‘papasha kwiwebhu’ ngeProjekthi yeFreewheel”. Le projekthi sisixhobo esivela kwi-AutoDesk Test Labs, evumela ukubhalisa abasebenzisi ukuba bagcine, baqhube iinkqubo, kwaye babelane ngedatha.
Oku kuye kwanyatheliswa nguLynn Allen kwelinye lala ma laboratories ase-AutoDesk kwaye ngulo nguqulelo:
1. Into yokuqala endiyenzileyo kukwenza umzekelo wokuzoba. Ndayibiza ngokuba ipapasha_i_web_test.dwg. Ndiyazi, andingowokuqala. Kujongeka ngathi kunje:
2 Ukusebenzisa amandla okupapasha kwe-AutoCAD, kwimenyu yefayili.
Lo asingomyalelo woPapasho endihlala ndiwusebenzisa ukwenza iifayile ze-DWF. Ukupapasha iwizard ine-interface ngokusebenzisa iingxoxo kwinkqubo epheleleyo, ndikhethe iifayile, indawo yokusebenza kunye / okanye ubeko, isikimu sombala njl. Kulula kakhulu.
3. Ukupapasha kwiwebhu kwahlukile kunokushicilela kunye nenketho yokwenza iifayile ze-dwf, njengoko ikwakha iphepha le-html kunye nokukhethwa kwefayile ye-dwf. Emva kokugqiba amanyathelo, ndibeke iifayile kwifolda endiyikhethileyo:
4. Ifayile ye-IM1.htm isisitshixo. Ndicacisile ubeko oluninzi okanye iifayile ze-dwg ezininzi, nangona ifayile enye ngokhetho lwesithuba inokusetyenziswa. Okokugqibela ikhowudi ijongeka ngoluhlobo:
<object id=”ADV” classid=”clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF” width=”100%” height=”100%”>
Uyakwazi ukubona tag ukuthi ichaza isikhangeli uya eziqalisa ifayile usebenzisa izakhono kweProjekthi Freewheel, kukho iyaboniswa njengomqwalaseli leyo ithetha ukuba ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na sofwtare epapasha wenza usebenzisa izakhono ezinikezelwa esi sicelo of AutoDesk.
5. Iseva yeProjekthi yeFreewheel kufuneka yenziwe ukuba ifake ifayile yakho kwindawo ekuyo kwiwebhu. Ke le ndawo ifuna ukuba ichazwe kwi-html. Umzekelo wam, ndisebenzise http://labs.blogs.com/files/ADR2FW njengendawo, ke ndiza kuyifaka kule nkqubo. Ngeenjongo zakho, uyakufuna indawo ekuyiwa kuyo, apho uza kugcina idatha yakho.
6. Ndisebenzise ukuseta izixhobo zeBerkeley ezibandakanya umtya obizwa ngokuba yi-sed.exe. Sebenzisa i-sed ngekhowudi ejongeka ngoluhlobo:
s/<object id=”ADV”classid=”clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF”/<iframe scrolling=”no”/
oku kundivumela ukuba ndiguqule i-IM.htm njengokhetho oluzenzekelayo. Ukuba unefayile engaphezulu kwesinye ye-html, kuya kufuneka usebenzise iskripthi kwifayile nganye.
7. Ndibaleke iskripthi kwi-IM1.htm, iziphumo zijongeka njengoku:
<iframe scrolling=”no” width=”100%” height=”100%”
Nje ukuba iifayile zilungiswe, ungathumela ubumbeko kwindawo okhethe kuyo kwinyathelo lesi-5. Ndisilayishe isiphumo i-acwebpublish.htm.
Ke nge-pinch yohlelo lokuyila, onokuyenza ngesandla ungazenzekelayo iinkqubo, ungapapasha iifayile zakho kwiwebhu kwaye abanye banokuzijonga ngaphandle kokufaka nayiphi na isoftware. Ke ukunceda abanye babelane yenye yeendlela ezinokubakho kwelebhu. Kwiminyaka eliqela kamva, i-AutoDesk yasungulwa AutoCAD WS, isixhobo onokwenza oku kunye nezinye iifayile ze-AutoCAD kwi-Intanethi.
Eyona ngqungquthela yenkomfa ye-Manifold
Ukulawula kude kwi-AutoCAD
IiProjekthi zobunjineli nge-AutoCAD Civil 3D